अविश्वास प्रस्तावमा भोलि मतदान : "अब सांसद अपहरण लुम्बीनीमा ! पालो कुन - कुन सांसदको होला ?" - Demo Khabar
लुम्बिनी विशेष अधिवेशन आजदेखि
अविश्वास प्रस्तावमा भोलि मतदान : "अब सांसद अपहरण लुम्बीनीमा ! पालो कुन - कुन सांसदको होला ?"
बुटवल, बैशाख । विपक्षी दलको निवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आइतबार (आज) देखि सुरु हुँदैछ । विशेष अधिवेशनले एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दलले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव टुंगो लगाउने छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदले अविश्वास प्रस्तावमाथि आ–आफ्ना धारणा राख्नेछन् । सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले छलफलमा उठेका विषयमाथि आफ्नो भनाइ राखेपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने छ । अब लुम्बीनीले गन्डकीकाे पारा अपनाउला की । अब सांसद अपहरण लुम्बीनीमा ! पालो कुन - कुन सांसदको होला ?
विपक्षी दलले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले अविश्वास प्रस्तावमाथि आजै मतदान गराउनुपर्ने अडान राखेपनि सत्ता पक्षले नमानेकाले मतदान एक दिनपछि धकेलिएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए ।
सोही दिन विपक्षी दलहरुले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन गरेका थिए । सोही निवेदनका आधारमा वैशाख १५ गते प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सचिवालयलाई १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाउन पत्र पठाएको थियो ।
यस्तो छ अंक गणित :
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि पदमुक्त हुँदा ८५ सदस्यीय भएको थियो । अहिले जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसद पनि पदमुक्त भएकाले ८१ सदस्यीय भएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जनता समाजवादी पार्टीका ५ सांसद गरी ४१ ले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसपाका ६ मध्ये पूर्वराजपाकी कल्पना पाण्डे लम्सालले हस्ताक्षर गरेकी थिइनन् ।
तर कल्पनासँगै सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको दुई घण्टामै मन्त्री बनेपछि जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले चारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सभाले चारै पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यसले गर्दा प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय भएको हो । जसमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन पनि कम्तीमा ४१ मत आवश्यक पर्छ । तर विपक्षीहरुसँग सभामुखसहित ३९ मत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दा ४० मत हुन्छ ।
जनमोर्चाको साथ पाउँदा पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन अझै एक मत कम हुन्छ । विपक्षीलाई फ्लोर क्रसको आश लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका ४१ मध्ये २ माधव नेपाल पक्षमा खुलेका सांसद छन् । तर उनीहरुले कर्णालीमा जस्तै फ्लोरक्रस गर्छन् भन्ने निश्चित छैन ।
उनीहरुमध्ये एकले मात्रै फ्लोर क्रस गरे पनि अविश्वास प्रस्ताव पारित भई सरकार ढल्न सक्छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक घर्ती भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्ने गरी आफूहरु अघि बढेको दाबी गर्छन् ।
आइतवार, बैशाख १९ २०७८०९:१७:१८